जीवनको सेरोफेरो: पानी प्रसोधन उद्योग खोल्दै हुनुहुन्छ ?
पानी सबैभन्दा अत्यावस्यक र सहज अनी उतीकै कठीन पनि छ पाउन का लागि । साथै यसको प्रसोधन उद्योग सञ्चालन पनि यस्तै सहज अनी जटिल पनि छ । यसका लागि कुनै डिग्री चाहीदैन, पूर्ण दक्ष बन्नु जरूरी पनि छैन । सामन्य १५ २० दिन कुनै प्राबिधिकले तपाइलाइ सबै सञ्चालन प्रकृया सिकाउन सक्छ । तर यो कुरा ख्याल राख्नु जरुरी छ हामीले बेच्ने पानीले उपभोक्तालाइ स्वास्थमा बिगार गर्नु हुँदैन । तपाइले बेचेको पानी भोली बजारबाट तपाइ स्वयंले पिउन सक्ने हुनु पर्छ । यि त भए साधारण कुरा अब लागौ उद्योगको लागि के के थप पूर्व अध्ययन चाहीन्छ त ?
सञ्चालन पुर्व ध्यान दिनु पर्ने कुराहरू
बजार भन्दा बाहीर तर बजारमा ल्याउन सहज स्थान छनोट गर्नु पर्छ । जसले लागत कम गर्न मद्दत गर्छ । भने कर लगायत अन्य छुट पाउन सहज हुन्छ । साथै सो ठाँउमा स्रोत के कस्तो छ त्यसको पुर्व अध्ययन जरूरी छ । कामदारको लागत कती पर्छ,
पानीको स्रोतको मुल्य कति पर्छ, बिद्युत जडान कती सहज छ, दर्ता प्रकिया सहज छ या छैन, मेशीनको क्षमता अनुसारको बजार माग छ की छैन, अन्य समान खालका उद्योग छ की छैन तिनको अवश्था कस्तो छ लगायत धेरै कुराको पूर्व अध्ययन गर्नु जरूरी छ ।
लागानी १५ लाख देखी ४ करोड सम्म मेशिनको क्षमता अनुसार मेशीन मात्र । यसमा ३ महीनाको लागी कच्चा पदार्थको स्टक राख्ने र बजारमा २ महीना वा एक बिल उधारो दिन सक्ने क्षमता हुनु जरूरी छ ।
कच्चा पदार्थको स्रोत
पानीको मुल वा स्रोत
कार्टुन वा प्लाष्टीक कभरः
लेवल तथा नेकसिल
कर्मचारी तथा कामदारको उपलब्धता
ज्याला दारी अथवा मासीक (तलब रू ६००० देखी १५०००) न्युनतम कर्मचारी संख्या १० देखी २५ जना ।
प्रबन्धक १ जना
अपरेटर १ जना
सहायक अपरेटर १ जना
ल्याब परिक्षक १ जना
लेखा पाल १ जना
बजार ब्यवस्थापक १ जना
फिलर, लोडर, चालक, हेल्पर १।१ जना प्याकिङ र अन्य भित्रि काम (३ जना )
एउटै रंग भएको कर्मचारीहरू एक जना ले ति सबै काम पनि हेर्न सक्छ ।
मेशिन तथा उपकरणहरू
हातले गर्न सकीने वा नभए पनी चल्छ ।
उद्योग स्थापना पुर्व र निरन्तर दैनिक रूपमा वा मासिक रूपमा वा ब्याच परिवर्तन संगै पानीको परिक्षण हुन जरीछ । स्थापना पूर्व रू १० हजार सम्म पहिलोपटक र ल्याब स्थापनाको लागी मात्र रू ५० हजार सम्म खर्च लाग्न सक्छ । यस बाट तपाइले कस्तो प्रकारको मेशिन जडान गर्ने हो वा मेशिनको लागत कती पर्छ थाहा पाउन सहज हुन्छ ।
प्राकृतिक स्रोतको मुल प्रयोग गर्ने हो भने घरेलु तथा साना उद्योग बिभागमा, यदी बोरीङ वा अन्य हो भने कम्पनि रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता शुल्क १५ हजार देखी ३५ सम्म (अधिक जानकारीको लागि बिभागमा नै सम्पर्क राख्ने), उद्योग बाणिज्य संघ, नगरपालिकामा दर्ता तथा राजश्व कार्यालयमा जानकारी दिने । सबै कामको लागी राजश्व बाहेक रू १ लाख सम्म (अन्य खर्च बाहेक)
भोल्टेज पुग्छ या पुग्दैन, ट्रान्सफर्मर जोड्न पर्ने हो या होइन यसका लागि अफिसियल खर्च १५ हजार जती लाग्छ तर तार अन्य उपकरण, मिटर लगायतको खर्च रू १ लाख बढीमा लाग्छ । साथै ट्रान्सफर्मर जडान गर्ने भए रू ३ देखी ५ लाख सम्म लाग्छ । साथै बिद्युत माग गर्दा ३० के भी वा बढी माग गर्नु पर्छ । (तर प्रयोगमा हुने बिद्युतिय उपकरणमा लेखीए बमोजी हर्स पावरको कुल योग भन्दा १० हर्स पावर ज्यादा माग गर्नु पर्छ)
बिरोधाभास तथा समस्याहरू
बजारमा रू ११० सम्ममा एक कार्टुन पानी पाइन्छ र बढीमा रू २०० सम्म पाइन्छ । पानीमा पियुस हालेर बिर्को लगाएर पनि बेच्ने पनि छन जसको नियमन छैन । चन्दा माग्ने, प्रायोजन माग्ने, तथा बिभिन्न खाले बार्गेनिङ गर्ने हरू धेरै छन ।
उद्योग सन्चालनको लागी छुटाउनै नहुने कुराहरू लेखापाल वा एकाउन्टेन्ट तपाइ भन्दा पहिला नियुक्त गर्नुहोस । दर्ता प्रक्रियामा कानुनी व्यक्ती वा कानुन व्यवसायी राख्नुहोस ।
प्रसोधितपानीको गुणस्तर निम्न बमोजिम हुनु जरूरी छ ।
पानीको मुल्य निर्धारण तथा बजेट (तपाइको हिसाब किताब)
Posted by Bishal Gautam at 11/06/2013
Labels: Current Issue, उद्यमी, रोजगारी